ESAT Afaan Oromo - Page 41 of 58 - ESAT Afaan Oromo
Lammiileen Itoophiyaa biyyaa bahuuf yaalan to’aanno jala Ooluusaanii pooliisiin beeksiiseera.
lammiileen Itoophiyaa 105 konkolattoota fe’uumsaa lamaan gara naannoo Sumaaleettin biyyaa bahuuf yaalaan to’aannoo jala akka olchee pooliisiin naanniichaa beeksiiseera Lammiilee gara biyyaa alaatti baqachuuf osoo yaalaan to’aanno jala oolaan keessa 24 dubartoota jedhameera. Konkolachistoota namoota gara seeraan alaatiin biyyaa baasuuf yaalaan 2 keessa tokko to’aanno jala wayita qabamu tokkoo yeroof akka hin qabamne pooliisiin naanniichaa beeksiiseera. Lakkofsi lammiileen Itoophiyaa baqatan ...
Gargaarsa meeshaa waaraanaa Amaayyaa Mootummaan Amerikaa hidhattoota Sooriyaatiif kennuuf karoorfate Raashaan mormite
Gargaarsi meeshaa waaraanaa amaayyaa Amerikaan hidhattoota Sooriiyaatiif kennuuf karoorfate nageenya loltoota ishee Sooriiyaa keessa jiraniif ni soodachisa jechuun Raashaan balaleeffattee jirti. Amerikaan hidhattoota mootummaa Bashaar Alasaad kuffisuuf qabsa’aniif Misaa’eelii Xiyyaara waaraanaa kuffisuu danda’uu fi meshaalee waaraanaa ammaayyaa biroo gargaarsaan kennuuf dhiyeenya murteesuun ishee ni yaadatama. Raashaan gama isheetiin, gargaarsi meeshaa waaraanaa amerikaan hidhattootaaf kennuuf karoorfate kun nageenya loltoota ishee Baashaar ...
Hidhamtootaa siyaasa hunda mana hidhaatti akka gadi dhiifaman Dhaabbata Mootummoota Gamtomaniitti Ambasaddar Amerikaa waamicha dhiyeessan.
Hidhamtoonni siyaasa biyyoota gara gara keessatti hidhamanii jiran akka gadi dhiifamniif dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Ambasaddar Amerikaa duulaa jalqabuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasa hidhee jiru gadi dhiisuun mirga ummata biyyaatti heeraa mootummaatiin mirkana’ee akka kabaju gaafataniiru. Itti-aanaa duraa ta’aa Paartii kongraasii Federaliistii Oromoo erga mana isaanii Adaamaatii loltoota mootummaa Itoophiyaatiin qabamanii hidhamanii waggaa tokko akka ta’e beekameera. Dhaabbata ...
Dhaabbanni Motummoota Gamtoomanii Yaada qoqqophii bittaa meeshaa waaraana sudaan kibbaa irra akka ka’aamuu dhiyaate irratti sagalee kennuuf
Yaadni qqqophii meeshaa waaraanaa sudaan kibbaa irra ka’uuf mootummaa Amerikaatiin dhiyaate kana Biiriteen fi Faransaayii deeggaraniiru. Yaa ta’u malee dhaabbaticha keessatti sagalee sagaleen kuffisuun aangoo kan qaban Chaayinaa fi Raashaan yaada qoqqophii bittaa meeshaa waaraanaa kana hambisuu danda’u jedhameera. Amerikaan qoqqophiin bittaa meeshaa waaraanaa kun biyyaatti keessatti nagaa amansiisa fiduuf akka gargaaru beeksiistee jirti. Biyyoonni biroo immoo tarkaniiffiin kun nagaa ...
labsi yeroo hatattamaa sarbamuu mirga namoomaatiif gumaachaa akka jiru dhaabbanni Human right Watch Beeksiise
Labsiin yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa labse sarbamuu mirga namoomaatiif gumaacha dabalataa gumaachaa akka jiru dhaabbanni Human right Waach Beeksiseera. Yeroo ammaas sababa labsii kanaatiin namoonni baay’een hidhamaa akka jiran dhaabbatichi beeksiseera. Mootummaan namoota kuma 20 ol hiriira mormii waan bahaniif hidhe keessaa namoota gara kuma 10nitti dhiyaatan gadhiisuun oduu gaarii akka ta’e dhaabbatichi beeksiiseera. Gaaffiin ummaataa labsiin kun akka labsamuuf ...